Ciidamo dadka deegaanka degmada Afgooye ku haayey dhibaatooyin joogta ah oo intooda badan laga saaray gudaha degmada – idalenews.com
Ciidamado dhibaato badan ku haayay Shacabka degmada Afgooye ayaa la sheegay in maanta intoodu badan laga saaray Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamadan oo lagu sheego in ay yihiin Ciidan qaran balse hal beel isla markaan dhac iyo boob lagu eedey marar badan dhibaato baahsan ku hayeen Shacabka ku dhaqan degmada Afgooye, iyadoo dhac iyo caga jugleenba ku haayay dadka deegaanka.
ciidamadan oo intoodu badan laga saaray Degmada Afgooye, ayaa waxay kaga harsan yihiin sida dad goob jogiyal ah laga soo wareyey laba goob oo kaliya, oo kala ah Buundada Afgooye iyo Isgoyska Baar Ismaaciil.
Mahdi Axmed Xasan, Gudoomiye Ku Xigeenka Degmada Afgooye ayaa wuxuu sheegay in goobaha laga saaray Ciidanka ay durbaba la wareegeen Ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska, sida uu yiri.
Sidoo kale wuxuu sheegay Maleeshiyaadka ee ku haray Isgoyska Baar Ismaaciil iyo Buundada Afgooye, laga saari doono maalmaha soo socda, marka la diyaariyo buu yiri Ciidamadii Booliska iyo Nabad Suggida ee kala wareegi lahaa.
Dowladda, ayaa marar kala duwan loogu baaqay in ay diirada saarto, sidii ay wax kaga qaban laheyd Maleeshiyaadkan ee dhibaatooyinka ka geysanaaya qaybaha ay ka joogto Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dhawaan ayay ahayd ka dib dagaal aad u xoogan oo ku dhex marey ciidamo kuwada tirsan kuwa DF soomaaliya gudaha degmada afgooye kuwaaso geestey dhimaso iyi dhaawaca isla markaana ku nafwaayey 11 qof oo isu jirey ciidamadii dirirta dhex martey iyo weliba dad rayid ah ee aan waxba galabsan oo lgau kor dagaalamey.
War deg deg ah: Madaafiic lagu garaacay xaafado ka tirsan Muqdisho.